कण्डमबारे यस्ता रोचक कुराहरु तपाईलाई थाहा नहुनसक्छ
एजेन्सी । तपाईलाई मन पर्छ वा पर्दैन तर कण्डम एक आवश्यकताहो । यो एक त्यस्तो चिजहो जसलाई तपाईले प्रत्येक चोटी यौनसम्पर्क गर्दा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
थाहा पाइराख्नुहोस कण्डमको बारेमायी ८ रोचकतथ्यहरु
वैज्ञानिकहरुका अनुसार प्राचिन युगका मानिसहरुलाई पनि कण्डमको बारेमा थाहा थियो । फ्रान्सको गुफाहरुमा भेटिएका प्राचिन पेन्टिङहरुको अध्ययनबाट वैज्ञानिकहरुले यस्तो प्रमाण फेलापारे कि हाम्रा प्राचिन पुर्खाहरुलाई पनि कण्डमको महत्वको वारेमा थाहा थियो । त्यसैले तपाई पनि सधैं कण्डम प्रयोग गर्नुहोस ।
यदितपाई एचआईभी लगाएतकाअन्य यौनजन्य रोगहरुको शिकार हुन चाहनुहुन्न भने कहिल्लै पनि लापरबाही नगर्नुहोस । कण्डमको प्रयोगले तपाईलाई व्यवहारिक रुपमै कुनै रोगबाट टाढा राख्छ । यस्तो धेरै नै उच्चतहको सुरक्षालाई ध्याननदिनु साच्चैं नै मुर्खता हुनेछ ।
यदि तपाईले एक सानो प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने एक पुरै तन्किएको कण्डममा पानी राख्नुहोस त्यसपछि तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ कि यसले ठूलो जग वा क्यान्टिनले भन्दा राम्रो काम गर्नेछ र यो चुहिँदैन पनि ।
५. ल्याटेक्स कण्डम पत्तालाग्नु भन्दापहिले अरु नै सामग्रीहरु प्रयोगमा आँउथे
८. कण्डमले यौन आनन्द कम गर्दैन्
कण्डम लगाएर यौनसम्पर्क गर्दा यौन सुख कमहुन्छ र तपाईले आफ्नो यौनसाथीलाई सन्तुष्टी प्रदान गर्न सक्दिन अथवा कण्डमको कारणले तपाईको यौन क्षमतामा नकरात्मक असर गर्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाई भ्रममा हुनुहुन्छ । वास्तवमा यसले यौन सन्तुष्टीमा कमी ल्याँउदैन । यसैगरि विभिन्न खालका कण्डम पाइने भएकोले आजकाल त्यस्तो समस्या छैन् । तपाईलाई फिट हुने विभिन्न साइजका र राम्रो अनुभव दिनको लागि बनाएका विभिन्न ब्रान्डका कण्डम बजारमा उपलब्ध छन् ।